Mesh Belt Impingement Mahiza, China Mesh Belt Impingement Mahara Mahara Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Square Technology Boka Co, Ltd.
Iyo yekumisikidza bhandi tanera furiza inonyanya kushandiswa kuomesesa zvakapetwa chikafu, ichiita kuti ive sarudzo inozivikanwa muindasitiri yezvokudya zvegungwa kukurumidza kutonhodza hove dzehove, dzakachengetedzwa shrimps, squid uye nezvimwe. Iyo inoshongedzerwa neanoshanda kwazvo uye ane hutsanana evaporator uye inoshandisa yazvino nzira yemvura yekupa nzira yeiyo kupisa kuchinjana kushanda iyo iri 20% yakakwira kupfuura tsika dzechinyakare. Zvichienzaniswa nenzira dzechinyakare, chikafu chinorema chinodzikiswa neanopfuura 1.5%.
● Iyo mesh bhandi inoratidzira yakatenderera dhizaini dhizaini dhizaina neyakaenzana symmetry kuitira kusimudzira kupisa kupisa maitiro.
●Iyo yekumisikidza bhandi tanera furiza inoshandisa inopinza inotonhorera inotonhorera yakagadziriswa pani yekugadzira tambo yekugadzira mapaneru, iyo inovimbisa yakakwira mwero wesimba kugona uye kunoshamisa kuvimbika uye mhando.
●Tunnel furiza ine yakangwara yepakati kutonga system, otomatiki yekuona mudziyo uye yambiro mwenje, izvo zviri nyore kuti vashandisi vashande nekuchengetedza.
Impingement mesh bhandi tanera CW1015 / 18 CW1415 / 18 CW1615 / 18 CW1815 / 18 CW2015 / 18 CW2215 / 18 CW2415 / 18 CW2615 / 18
Kureba kwenguva refu L 10M 14M 16M 18M 20M 22M 24M 26M
Hupamhi hweupamhi W 3200mm / 3500mm
Mesh bhandi upamhi Bhandi upamhi 1500mm / 1800mm, unoshanda upamhi 1400mm / 1700mm
Kureba kwechiteshi 30~70mm chinjika
Rakasarudzika simba 25kw 36kw 41kw 47kw 52kw 58kw 63kw 69kw
Qty. yevaFans 4 6 7 8 9 10 11 12
Iyo ipfungwa yezvikafu zvegungwa, pastry, michero nyama uye chikafu chakagadzirwa.